Ninkii Malmö oo kiiskiisa la xirriiriyey falal horey u dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ninkii Malmö oo kiiskiisa la xirriiriyey falal horey u dhacay
Publicerat fredag 4 mars 2011 kl 13.37
Nin horey dadka magaaladda Malmä argagax ku riday islamarkaasina xabad ku shiishi jiray ayaa haatan falal dambiyeedyo horey uga dhacay magaaladaasi lala xirriiyey. Labo kamid dembiyadaasina ay yihiin dad xabado lugu shiishay
Falalkaasi dembi ee ka dhacay magaalada Malmö ayaa waxaa kamid ah, jirdil iyo isku day dil. Waxaana ay falalkani dhaceen sanadihii 2003-da iyo 2008-dii. Wargeyska maalin laha ah ee Skånska Dagbladet ayaa warbixinta qoray.
Ninkan ayaa tan iyo bishii november ee sanadkii hore waxaa uu ku jiraa saldhiga, kadib markii sadex jeer uu isku dayey inuu dad dilo iyo dhowr jeer oo kale oo tobonaeeyo gaaray. Falalka ninkani uu isku daygiis dileed kula beegsanayey dadka reer Malmö ayaa u badnaa kuwa asalkoodu yahay ajaanibta. Booliskana waxaa ay iminka baarayaan falal dambiyeedyo 20 ilaa 40 jeer dhacay, kuwaasoo lala xirriirinayo.